Madaxwayne Farmaajo maxaa ka hor-taagan in uu tago Gobalada Abaarta ka jirto | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwayne Farmaajo maxaa ka hor-taagan in uu tago Gobalada Abaarta ka jirto
Madaxwayne Farmaajo maxaa ka hor-taagan in uu tago Gobalada Abaarta ka jirto
Waxaa safar dibada ah u baxay Madaxweyanaha Dalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo wuxuu Magaalada Cummaan Ee Dalka Jordan uga qeyb galayaa Shir Madaxeedka Wadamada Jaamacadda Carabta.
Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta ayaa warbaahinta caalamka u sheegay shirka beri ka furmaya Magaalada Cummaan in si weyn dhaqaalo loogu aruurin doono Abaaraha haysta shacabka soomaaliyeed.
Waxaa kaloo shirkan ka qeyb galaya madaxda wadamada carabta intooda heysata mathabta suniga ah ee dareensan Qatarta ku wareegsan ee dawlada iran oo taageerta xukumadaha Ciraq,Siriya Yeman .
Ururka jaamacada carabta ayaa isku badalay mid ay isku haystaan dawladaha carabta ah ee mathabta suniga iyo mathabta shiicada kala ah.
Waxay waqtigan Dawlada soomaaliya u taageerayaan wadamada carabta kuwa mathabta suniga haysta Iyagoo u arka in shacabka soomaaliyeed yahay wadan suni wadamada Jordan,Sacudiga,kuwayt Masar iyo imaaraadka waxay si xoog ah uga qayb qaadanayaa Quudinta dadka abaaraha soomaaliya ku dhibaateysan.
Xaqiiqda jirta waxay tahay Shacabka soomaaliyeed ayaa aad u dhibsadey Safarada isku xiga ee madaxdii dalka soomartay dibada ku aadi jireen iyadoo dhibaato badan wadanka taal.
Madaxweynayaasha soomaaliya kuwii ugu danbeeyey waxaa aad u tiro badnaa qaalina ahaa safarada ay dibada ku tagijireen safaradaa wax macna lehna kuma soo kordhin jirin xallinta mushkiladaha Soomaaliya iyo wax ka qabashada dhibaatada dadka Soomaaliyeed gudaha ka haysta.
Su’aashu Falanqeyntu Madaxweyne Farmaajo safarka dalka gudihiisa Goormuu bilaabi doonaa?
wuxuu hore u tagey sacuudiga,Kenya iyo hada oo uu tagay wadanka urdun
anigu waxaa aamin sanahay inaaney muhiim ahay in madaxweynu shirkasta oo caalami ah tago. Dhabaan madaxda Dastuuriga ah way Ku matali karaan Dawlada soomaaliya Shirka caalamiga ah.
Waxaa jira Abaaraha ku dhuftay Soomaliya oo dhan waxay saameen ku yesheen nolosha kumanaan qof, kuwaasi oo haatan ku nool qeybo ka mid ah Gobolada Dalka Soomaaliya Dadkaas oo dhan waxay maqleen in wadanka madaxweyne cusub yimid waa waajib Qaran in intii uu awoodo uu booqdo Madaxweynuhu.
Colaada waxaa laaga bixi karaa marka madaxd wadanka xukunta ogolaato inay naftooda u huraan sidii nabad lagu heli lahaa.
Warbixinta Waxaa la qoray shirka Jaamacadda Carabta ka hor.
Qoraalkan kama turjumayo siyaasadda Xaqiiqa Times, waxaa uu gaar u yahay qoraaga.
Falanqeyta siyaasada soomaaliya.
Previous articleDaawo sawirada ansaxinta golaha Wasiirada xukuumadda Soomaaliya
Next articleShirka Jamaacadda Carabta oo ka dhacay Urdun ( Sawiro)